Home Wararka Al-shabaab oo dhaq dhaqaaqyo howlgal xoogan ka wada degaanka Wisil
Al-shabaab oo dhaq dhaqaaqyo howlgal xoogan ka wada degaanka Wisil
Wararka ka imaanaya degaanka Wisil oo ka tirsan degmada Hobyo ee Gobolka Mudug ayaa sheegaya in Al-shabaab laba jiho kaga sii siqayaan degaankaas. Dagaallamayaal hubaysan oo ka tirsan Al-shabaab ayaa sida wararku sheegayaan saacadihii la soo dhaafay laba dhinac kaga durkay degaanka Wisil.
Al-shabaab ayaa maalmihii u danbeeyay abaabul ciidan ka wadday dhulka ku xeeran Wisil islamarkaana waxa cabsi laga dareemay halkaas. Ciidamo degaanka ah ayaa sidoo kale la sheegay in ay diyaar-garow ugu jiraan difaaca Wisil maadaama aysan weli garab ka helin Ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya.
Previous articleWaa Kuma Musharrax Madaxdweyne Xasan Cali Kheyre?
Next articleBaarlamaanka cusub oo aanta muqdisho ku yeelanaya kulankoodii u horeeyay
Qofkii u horeeeyey oo Kenyaan ah oo u dhintay cudurka...
(Deg Deg) Dagaal khasaare badan geystay oo ka socda magaalada Beledweyne